भरतपुर विमानस्थलले पायो आफ्नै दमकल -
भरतपुर विमानस्थलले पायो आफ्नै दमकल
३१, भदौ, चितवन । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा दमकल आइपुगेको छ । विमानस्थलका प्रमख पवन गौतमले दिएको जानकारी अनुसार विमानस्थलमा २९ सय लिटर पानी, ५ सय लिटर फोम र २५० केजी सुख्खा केमिकल अट्ने दमकल आएको हो ।
करिब ३ करोड रुपैयाँको लागतमा दमकल ल्याएपछि जनशक्ति व्यवस्थापन र तयारीका लागि तालिम दिन थालिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका गरी २५ जनालाई ४ दिनसम्म दमकल प्रयोग र सुरक्षाका बारेमा तालिम दिन थालिएको प्रमुख गौतमले अनलाइनखबरसँग बताए ।
दमकल सञ्चालनमा आउन भने अझै एक महिना लाग्छ । भरतपुरका लागि दमकल सञ्चालन गर्न ५ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रमुख गौतमले बताए । विमानस्थलको सुरक्षालाई ध्यान राखी दमकल ल्याइएको हो । भरतपुरसँगै चन्द्रगढी, जनकपुर र धनगढीका लागि उति नै क्षमताका दमकल ल्याइएका छन् । विमानस्थल भन्दा बाहिर कतै आगलागी भए दमकल पठाउन नसकिने प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।
वायुसेवा सुरक्षा अझै बलियो बनाउँदै लैजाने नागरिक उडयन प्राधिकरणको योजना अनुसार दमकलहरू ल्याइएको विमानस्थल प्रमुख गौतमले बताए । अहिले ल्याइएका दमकलहरु अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आइकाओ) मापदण्डका हुन् । यसै बर्ष सानो अल्ट्रालाइट दमकल रारा, तुम्लिङटार, जुम्ला, जोमसोम र सिमिकोट विमानस्थलका पनि ल्याइएका छन् । तिनको क्षमता ५ सय लिटर पानी र ५० लिटर फोम रहेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक सिमरा, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, सुर्खेत र लुक्ला विमानस्थलमा साना ठूला दमकल छन् ।
Prevभदौरे झरीमा रुझेको काठमाडौं
Nextइलामको चियाः न लाग्छ शनिबार, न छुन्छ सार्वजनिक बिदाले
भोलीदेखि बुद्धशान्तिमा कोही आउन नपाउने, जीम, व्युटि पार्लर, सैलुन खोले कार्वाही ।
ज्यानमारालाई छुट दिनु नहुने भन्दै नेवि संघले बुझायो ध्यानाकर्षण
कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन बुद्धशान्तिमा सुरु भयो फग सेनिटाइजिङ मेसिन
लिम्बुवान,नेकापा,राप्रपा त्यागेर काङ्ग्रेसमा आएका नव प्रवेसीलाई नेता थापा र थेबेले गरे स्वागत
६ करोडको लगानीमा उद्योग संचालन भएसंगै सुपारी कृषकलाई दोहोरो फाइदा
बुधबारे मिडिया प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित
बुद्धशान्ति न्युज डटकमका लागि
प्रधान सम्पादक : गङ्गाराम गड्तौला
सम्पादक : रोशन भट्टराई
बजार व्यवस्थापक : भेषराज बास्कोटा/दीपेश भट्टराई